NETFLIX ၏ EUROVISION: THE STORY OF FIRE SAGA မှအကောင်းဆုံးသီချင်းများကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ထားသည် - သတင်း
Netflix ရဲ့ Eurovision မှအကောင်းဆုံးသီချင်းများ၏တစ် ဦး ကထည့်သွင်းစဉ်းစားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်: မီးသတ် Saga ၏ပုံပြင်
သင်သည် Netflix ၏ Eurovision နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်ကိုမနှစ်သက်ပါကဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ။ ဒါကမှန်ပါတယ်၊ အခုသင်ဖတ်နေသည့်မည်သည့်ကိရိယာကိုမဆိုပိတ်လိုက်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစာမျက်နှာဟာဒီရုပ်ရှင်ဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကြည့်ရှုသူများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောဇုန်တစ်ခုဖြစ်သည် - ခေတ်သစ်ရုပ်ရှင်၏အဓိကလက်ရာဖြစ်သည်။
ငါဆိုလို, ဂီတဘယ်လောက် fuck ဆိုတဲ့ကောင်းသောခဲ့!? ကျနော်တို့ရိုးရိုးသားသားရာခေလသည် McAdam အားဖြင့်ဤမျှခက်ခဲအပေါ်အပေါ်လိုက်လျောခံရဖို့ထိုက်တန် ( သို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်စားသီဆိုခဲ့သည် ) ။ အခြားသီချင်းအားလုံးနီးပါးသည်အစိုင်အခဲရွှေရောင် BANGER ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မကြာခဏဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်ပါ (ကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပါတီ၏ Pitch Perfect ပြင်ဆင်မှုကိုသင်ကြည့်နေသည်။ ) သီချင်းကောင်းတွေများများစားစားရှိပေမယ့်သီချင်းတစ်ပုဒ်သာနိုင်ရမယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲကသီချင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်စုစည်းမိပြီးနာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာတရားသူကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ရမှတ်ကဒ်တွေကိုကိုင်ထားကြတာကိုပြောရတာဂုဏ်ယူပါတယ်။ သွားရအောင်
Da Homies နှင့်အတူ 14 Coolin
ဆိုလိုသည်မှာ Mean Girls ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သောကလေးဆန်သောကလေးဖြစ်သည်။ nope nope nope ။
အချစ်၏ Lion ၁၂
marmite bloke နှင့်အတူ Marmite ညှိ။
ဒါဟာဒီကောင်လေးရဲ့သဘောတူညီချက်ကဘာလဲဆိုတာရှုပ်ထွေးစေတယ် - သူ Sigrit ဆီသို့ ဦး တည်မတော်မတရားဖြစ်ခြင်းသလဲ ဒါမှမဟုတ်သူကပြိုင်ပွဲမှာသူမအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေတာလား။ နှစ်ခုလုံး? သူသည် Edinburgh တွင်ကြီးမားသောအိမ်ကြီးကိုအဘယ်ကြောင့်ပိုင်ဆိုင်သနည်း။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အားလုံးသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤညှိနှိုင်းချက်သည်ရှုပ်ထွေးနေသည်။ ပန်ကာမဟုတ်ပါဘူး။
ကောင်းပြီ၊ (တန်းရှစ်ဂီတပညာရှင် ဦး ထုပ်ပေါ်တွင်တင်ထားသည်) ဤတေးသွားတွင် chromatics ၏အဆက်မပြတ်ပြေးနေခြင်းသည်ဂီတအနုပညာတစ်ခုကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤသီချင်း၏နောက်ကွယ်၌အခွက်တဆယ်အချို့ရှိနေသည်မှာမငြင်းနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ထပ်ခါတလဲလဲပုံရသည် - အထူးသဖြင့် တဆင့်သံသရာမှလေးသိသာသော့ချက်အပြောင်းအလဲများရှိပါတယ်အခါ။
Yup, ဒီသီချင်း Eurovision ၏အတော်လေးပုံမှန်အသံပေမယ့်သီချင်းဆိုကျနော်တို့ကရုပ်ရှင်ကနေလိုအပ်ကြောင်းဘိန်း silliness များအတွက်အလုံအလောက်ချ dumbed မဟုတ်ပါ။ အိုးကမယ့်မဟုတ်ပါဘူး သော နားထောင်ဖို့ပျော်စရာ။
အမှုအရာတက်ရှာနေကြသည်, သို့သော်ဤသည် Urban Outfitters အတွက်ကစားစကားကိုနားထောငျချင်ပါတယ်တစ်ခုခုကဲ့သို့လုံလုံလောက်လောက်အသံတစ်သီချင်းသည်စာရင်းထဲတွင်ပျမ်းမျှနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ဒီဟာကနည်းနည်းရှင်းနေတာပဲ။
Lordi-esque နဂါး၏ပြည့်စုံသောအော်တိုညှိသံနှင့် Lordi-esque နဂါး၏ကြမ်းတမ်းသောအသံကြားတွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ပျမ်းမျှ ၄၂ စက္ကန့်ဖြစ်သည်။ နားကိုအကြီးအကျယ်ထိုးနှက်ခြင်းနှင့်အချို့သောကောင်းတဲ့တံတားကိုသဟဇာတဖြစ်ခြင်း, ဒါပေမယ့်စိတ်ကူးမဟုတ်ပါဘူး။
အဘယ်ကြောင့် Ellen ပြသဖျက်သိမ်းရပြသခဲ့တာလဲ
Kelly Clarkson ရဲ့မင်းရဲ့ဘဝဟာမင်းမရှိရင်ငါ့ဘဝကိုနစ်မွန်းလိမ့်မယ် (ဒါကိုသတိထားမိတဲ့ငါပဲ။ အိုကေ) နဲ့ဆင်တူတဲ့ chord တိုးတက်မှုရှိခြင်းအဖွင့်အခန်းငယ်တွေအပြင်၊ ဒါကနည်းနည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့်ထပ်ခါတလဲလဲတောင်းဆိုတာကအံ့သြစရာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဖျော်ဖြေရှိရာအနည်းငယ်ငုပ်ဘား။
6. မီးတောင်က Man
ဤသီချင်း၏အစတွင် Will Ferrel ၏ထည့် ၀ င်မှုပါဝင်သောနှာခေါင်းပြောဆိုမှုများသည်မည်သူမျှသူ၏ပါးစပ်ပေါ်သို့တက်။ နီးကပ်စွာကြည့်ရှုရန်မလိုအပ်သည်ဟူသောအချက်နှင့်ပေါင်းစပ်။ အချို့အမှတ်အသားများကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အတော်လေးစိတ်ကူးထားဆဲဖြစ်သည်။
ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံမှသည် panning ရိုက်ချက်များနှင့်ထူးခြားသည့် Europian isms များအထိဆိုလျှင်မည်သည့်သီချင်းကမဆိုနားမလည်နိုင်သော Eurovision ၏ထူးဆန်းမှုကိုဖော်ပြလိုလျှင်၎င်းသည်ရိုက်ချက်တစ်ခုနှင့်အတူပါလိမ့်မည်။
ကန ဦး ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ပြန်စမှုသည် Eurovision သည်သင်၏နှလုံးသားမှစားသောရိုးရှင်းစွာဖြစ်သည်။ အဆိုပါစိတျဝငျစားတိုးတက်မှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအလွန်ဥရောပနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ - မှုတ်သွင်းသည်, ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောနားထောင်ပါတယ်။
ဒီသီချင်းကတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်။ ကပဲ segways အပေါ် Edinburgh န်းကျင် gallivanting Sigrit နှင့် Lars ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောတေးသံကိုမသတ်မှတ်ဘဲနေသနည်း အိုကေသည် busking စွမ်းဆောင်ရည် (အထူးသဖြင့်အေးခဲသောစကော့တလန်) တွင်အဓိပ္ပာယ်သိပ်မရှိလှပါ၊ ၎င်းသည်ဤစာရင်းရှိကျန်ရှိသည့်အခြားသီချင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်နာကျင်သောလက်မနှင့်တူနေသော်လည်းမည်သည့်အရာထက်မဆိုဂီတအပိုင်းအစတစ်ခုအဖြစ်ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျပိုကောင်းသည် အပေါ်က။
ဒါကလူအများစုရဲ့အဆိုးမြင်ဆုံးလူတွေကိုကျွန်တော့်ကို Cheshire ကြောင်တစ်ကောင်လိုသဟဇာတဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကအဲဒီအခန်းရှိ Pitch Perfect စွမ်းအင်ကအရမ်းမြင့်မားပါတယ်။ ယင်းကိုရိုက်ကူးခဲ့ပုံ၊ အတိတ်မှ Eurovision ကြယ်ပွင့်များမှချိုသာသောသရုပ်ဆောင်များ၊ ဤသည်စုံလင်ခြင်းဝေးမဟုတ်ပါ။
ဒါကတရားဝင်သီချင်းဖြစ်တယ်။ Demi ဟာအခုမှစပြီးသူမရဲ့ပွဲတွေမှာဖျော်ဖြေသင့်တယ်၊
သီချင်းစာသားများသည်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည် (သူမခေါ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်း၊ မည်သူသိသနည်း။ ) သို့သော်အသံများသည်အံ့မခန်းဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဤစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောသီချင်းမှာရေဒီယိုတွင်လူဟုမထင်ဘဲဖြစ်နိုင်သည် ထူးဆန်းတယ် သေချာဘို့အအပြစ်ရှိအပျော်အပါး playlist add ဖို့တစ်ခု။
ဤသည်အကြီးမြတ်ဆုံး Showman ၏ reeks ။ Reeks ။ ဒါကြောင့် NUMBER ONE ရဲ့အဘယ်ကြောင့်ထိုအ !!!
ဘာကိုမကြိုက်လဲ? ဒါဟာမျိုးချစ်စိတ်ပါ ၀ င်တဲ့ Will Ferrel ကသိပ်မများပါဘူး၊ ဒါဟာတကယ့်ကိုကောင်းကောင်းရေးထားတာပါ။ ဒီနေရာမှာဘယ်သူ့ကိုမှမကြည့်ရသေးတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့သူကိုကြည့်ပြီးကြီးမားတဲ့ငရုတ်သီးမရ။
• ငါ Netflix ရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်း Eurovision ရုပ်ရှင်, The Story of Fire Saga ကိုကြည့်နေခဲ့ 17 အတွေးများ
• စစ်မှန်တဲ့ Eurovision စူပါပန်ကာတစ်ခုတည်းသာ ၁၀/၁၆ ဂိုးသွင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး